INKUNI EQINILEYO KWIKHITSHI (IINKONZO KUNYE NECONS) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Inkuni eqinileyo kwiKhitshi (Iinkonzo kunye neCons)
Inkuni eqinileyo kwiKhitshi (Iinkonzo kunye neCons)
Umgangatho onzima owenziwe ngobunjineli ekhitshini mhle, kwaye unokubiza ngendlela engaphantsi komthi okhuni wesiqhelo. Umgangatho wokhuni olomeleleyo lubhekisele kwimveliso eyenziwe ngumbindi womthi okhuni okanye iplanga elimalunga nesithathu ukuya kwishumi elinambini lemiqolo ecinezelweyo ngokudweliswa kunye nokuncamatheliswa. Kukho umaleko ophezulu wokhuni oluqinileyo olunamatheliswe kwindawo ephezulu yomongo. Kukho ukufumaneka kolu hlobo lokutyibilika phantse kulo naluphi na uhlobo lweentlobo zeenkuni. Ndwendwela eli phepha ngolwazi oluthe kratya malunga neenzuzo kunye neengozi zokuqina imigangatho eqinileyo ekhitshini .
Uncedo ekusebenziseni iiplanga zobunjineli kukuba inokuchasana ngakumbi nenqanaba lokufuma xa kuthelekiswa nomgangatho oqinileyo womthi. Kolu nxibelelwano, inokufakwa kwigumbi elingaphantsi elifumileyo okanye kwizithuba ezinokufuma okuphezulu okanye ukufuma okuphantsi kunamanqanaba aqhelekileyo. Ingafakwa ngokulula ngokuthi uyincamathisele ngokuthe ngqo phezu kweesilayiti ezomileyo ngaphezulu okanye ngaphantsi kwebakala okanye ukuyityabeka ngapha nangapha komgangatho wokhuni.
Imigangatho yokhuni olwenziweyo yobunjineli iza nobubanzi obahlukeneyo ukusuka kwiintshi ezintathu ukuya kwezixhenxe kunye nobukhulu obahlukeneyo ukusuka kwi-intshi yesibhozo ukuya kweyesithathu. Baye beza kwiindidi ezahlukeneyo zasekhaya kunye nezangaphandle zomthi onzima. Olu hlobo lwemigangatho yemithi lwenziwa ngeendlela ezimbini. Okokuqala, okusikiweyo okanye ukusika okusikiweyo apho umphezulu womgangatho wokunxiba ungaphezulu usikiwe kwilog obonisa ukubonakala kwendalo kweenkuni kunye neeprojekthi zokugaya okucocekileyo. Kananjalo, olu hlobo lokusika luyakwazi ukuvumela umaleko wokunxiba otyebileyo. Okwesibini, ukusikwa kwirotary apho umaleko onzima wokunxiba umthi oxutyiweyo ucocwa kwilog ngokusebenzisa ii-lathes ezinkulu. Indlela yayo yokuxobuka inokuba nokuhlanjwa komhlaba.
Ubuchwephesha bePlanga kunye neNgxelo
-Ijongeka imangalisa kwaye ixabisa kakhulu ngaphantsi kwemigangatho eqinileyo yomthi
-Umgangatho weplanga wobunjineli wale mihla uphantse wahlukaniswa kumgangatho oqinileyo womthi
- Iintlobo ngeentlobo zeenkuni kunye nokugqitywa okukhoyo
-Ingafakwa isanti kwaye iphinde icokiswe kaninzi, kodwa hayi rhoqo njengemigangatho eqinileyo yomthi
- Ngokubanzi lulwamkele ngakumbi utshintsho kwimozulu, kwaye luyanyangeka ukufuma kunye nokufuma kunokwakhiwa komthi rhoqo- Inokufakwa ngaphezulu komgangatho wokufudumeza ngokungafaniyo nomthi okhuni
-Ayonyani yomthi oqinileyo onokuthi ube yinto enokubacaphukisa abanye abantu.
-Ubomi beplanga yobunjineli obucwangcisiweyo abukho kufutshane nomthi wokwenene
Kubalulekile ukuba wazi iimfuno zakho ngokubhekisele kumgangatho wekhitshi lakho. Qaphela ukuba loluphi uhlobo lwezixhobo ofuna ukuzifaka. Ukuba indawo ekhethiweyo yomgangatho omtsha iya kuhlala ihamba-hamba kwaye idibane nokuhamba kweenyawo mihla le ngoko umgangatho wobunjineli ngowona unokukhetha. Ngale ndlela, uya kuba nokugcinwa okuncinci. Ngobungqingqwa bayo obunxibileyo unokusika isanti kwaye ugqibezele umgangatho ukuba kukho imfuneko yoko. Indawo engahambanga-amaxesha ngamaxesha ayifuni mfuneko yokunxiba. Ewe, imigangatho yobunjineli ihlala ixesha elide kakhulu kwiindawo ezifumana ukugcwala kweenyawo ngakumbi.
Iinkuni zobunjineli zithathwa njengezona zihambelana kakhulu nomthi oqinileyo. Ikwanokufana xa kufikwa kwixabiso. Ngokuyisebenzisa, ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwendlu liba phezulu ngokunjalo. Ngokubhekisele kufakelo, iwela phantsi kobunzima obuphakathi. Ihamba ngenkqubo yokustapisha kunye nokuncamathelisa kumgangatho osezantsi nje ngomthi oqinileyo kodwa kukho ithuba lokuthenga i-floating engineered flooring enokukhwela ngokuzimela kwi-subfloor. Kakhulu, ezi ntlobo zemigangatho zinokufakwa nakweliphi na igumbi ngaphandle kwamagumbi aqheleke kakhulu ukufuma njengamagumbi okuhlambela. Imveliso yenziwe ngomthi enokuhamba kancinci ekubandeni kwenza ukuba indawo ifudumale ukuze ithuthuzele.
Nantsi ividiyo emfutshane malunga nendlela yokufaka i-floating engineered flooring engineered.
Amanqaku ayiliweyo oYilo lweKhaya eliPhakathi onokuLithanda
Iindidi zeKhitshi loMgangatho - Uyilo lweKhitshi Iingcamango - Isikhokelo seNdleko yokuLungisa iikhitshi - Iikhitshi eziqinileyo zomthi - Umgangatho okhuni kuLuhlu lweeKhitshi kunye neNgxelo
ukukhuthaza iivesi zebhayibhile zamadoda
izipho zokubandakanya umhlobo osenyongweni
umtshato enkosi izipho zabazali
ide kangakanani imisitho yomtshato
izihlangu ezilokhwe eziluhlaza ze-navy zomtshato
isipho kumama womyeni